जिल्लास्तरको कार्यदलले गरेको गल्तीको अपजस केन्द्रलाई दिन मिल्दैन : नेता चौहान - Hamro Kalam
Home Bannernews जिल्लास्तरको कार्यदलले गरेको गल्तीको अपजस केन्द्रलाई दिन मिल्दैन : नेता चौहान
दुई वाम पार्टी एकता भएपछि सबै जिल्लामा पदीय बाडफाँड भइरहेको छ । अधिकांश जिल्लामा एकले अध्यक्ष पाए अर्काेले सचिव पाउने सहमति बनेको छ । अर्घाखाँचीमा पूर्वएमालेलाई अध्यक्ष र पूर्वमाओवादी केन्द्रको भागमा सचिव परेको छ । अर्घाखाँची जिल्ला अध्यक्षका लागि पीताम्बर भुसाल सिफारिस भएसँगै चरम विवाद देखिएको छ । अध्यक्षमा सिफारिस गर्दा आफूलाई अन्याय भएको भन्दै तत्कालीन एमालेका जिल्ला सचिव रामबहादुर चौहान न्याय खोजिरहेका छन् । २०३८ सालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय रहेका चौहान संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा निर्वाचन परिचालन कमिटिको सचिव भएका थिए । यसरी एकपक्षीय रुपमा सिफारिस गरेर पार्टीको विधि प्रक्रियालाई लत्याएर गरिएको सिफारिसले आफूजस्ता इमान्दार र योग्य तहका नेताहरुको अपमान भएको भन्दै चौहान नेकपाका शीर्ष नेतालाई भेटेर यसलाई सच्याउन र पार्टीलाई पद्धतिमा चलाउन आग्रह गरेका छन् । यसैविषयको अन्तरवस्तुमा रहेर गरिएको कुराकानीको संपादित अंशः
के तपाईलाई आफूचाँही गुट उपगुटको शिकारमा परेँ भन्ने लागेको हो ?
पाटीभित्र विभिन्न गुट उपगुट छन् र हुन्छन् पनि । तर म अहिलेसम्म कुनै व्यक्तिको पुजारी हुन सकिनँ । म सिंगो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा लागे । म जनताको जनवाद र पार्टीको सिद्धान्तमा लागे । जुन कारणले पनि अहिले यो नियती भोगिरहेको छु ।
नेकपाका सबै प्रदेश संगठन कमिटीको जिम्मेवारी बाँडफाँट कहाँ को ? (नामसहित)
ललितपुरका चार वटा पशु बधशाला शिलबन्दी, अधिकांश वधशालाबाट कुहिएको बिक्रि गरेका खुलासा